Norvezy dia matetika mifandray amin'ny hatsiaka, ny oram-panala sy ny orsa eny an-dalambeNa izany aza, na dia eo aza ny zava-misy fa ny firenena dia any Avaratry ny kaontinanta Eoropeana, ny fahavaratra ny mari-pana matetika mitsangàna etsy ambony dia dimy amby roa-polo degre. Ary mba jereo ny orsa mila mandeha any Svalbard, izay hita akaiky kokoa amin'ny Tendrontany Avaratra noho ny tanibe. Toy ny iray amin'ireo mpitarika ny fari-Dranomasina Firenen izao tontolo izao, ny Norwegians dia mifandray matetika amin'ny trondro. Kely ny toerana eto amin'izao tontolo izao afaka hanandrana ny trondro sy hazan-dranomasina, sy ho toy ny zavatra morontsiraka.
Faritra iray hafa izay ny Norwegians efa nihoatra rehetra dia ny ririnina fanatanjahan-tena.
Milaza izy ireo fa zavatra ny ankizy dia teraka miaraka amin'ny haingam-pandeha teo amin'ny tongony. Ny zavatra ny olona dia mirehareha amin'ny rehetra ny maro medaly Olaimpika izay nandresy tamin'ny skiers. Fa, indrindra ny rehetra, Norvezy dia fantatra noho ny majestic natiora.
Miresaka momba ny Norvezy dia mety ho tsy manam-petra
Riandrano, tendrombohitra, fjords, vongan-dranomandry sy ny Nosy, fasika amoron-dranomasina sy ny Jiro avaratra any amin'ny tendrontany arktika amin'ny ririnina, ny Manontolo ny morontsiraka ny firenena indented ireo tery sy ny lalina-bays, hohiraina eto fahiny-Pianakaviana sagas.
Sambo tours ny fjords - ny tena mahavariana dia, izay ihany no afaka ho hita ao amin'ity firenena ity.
Ity firenena ity ka tsy mahazatra ary miavaka, manome isan-karazany toy izany ny traikefa, fa mbola ao aminy mandrakizay mitoetra ho azy ny mpifatotra. Any Norvezy te-hiverina indray, ary indray ho tsara toerana nahita teo aloha dia tsikaritra antsipirihany, ary ny vaovao, mbola tsy voatrandraka. Hitan'ny mpahay siansa atao, ara-bakiteny, isaky ny dingana ny lalana. Tampoka mahita ny tsy mahazatra singa-pikambanana na amim-panetren-tena mamitsaka ao amin'ny maitso ny Zaridaina sary sokitra. Tena mahavariana ny fomba mahay ny Norwegians hanambatra ny farany architectural fironana amin'ny ohatra ny fahiny an-tanàn-dehibe fandaminana. Mendrika ny fankasitrahana sy ny fikarakarana izay voavonjy sy ny laoniny ny trano, izay naorina maro taonjato maro lasa izay. Tanàna kely tsy mitsahatra gaga amin'ny originality ny trano sy ny fomba fiainana milamina. Any Norvezy, ny dikan'ny teny latina hoe"fomban-drazana"("hamindra") dia fantany tsara, saika ny ara-bakiteny. Hatramin'ny taranaka fara mandimby dia lasa inona no heverina ho ny firenena harena. Io santionany avo ny zava-kanto (sary hoso-doko, ny sary sokitra, ny architecture), ny sy ny fahaiza-manao ny knitting, sy ny mpanjono, sy ny lakozia. Eto dia afaka mahazo nahalala ny asa-tanana, izay niseho tamin'ny taonjato lasa izay. Ary momba ny tsara, na dia feno fanajana, ny toe-tsaina manoloana ny harena, ary tsy afaka miteny. Efa nandre ny fanaratsiana? Fomban'ny mampisy ny angano sy ny tantara momba ny fanaratsiana sy ny hafa angano zavaboary, izay misy mponina an-tendrombohitra sy ny ala Avaratra amin'ny firenena. Angamba ianao mbola nisy? Tsy misy afa-tsy fomba iray mba hahitana. Mba mandehana any Norvezy.
Le site français de rencontres gratuites de rencontres en France, les Antilles rencontres
kisendrasendra chat te-hihaona dokam-barotra trandrahana ombiasy tao Chatroulette download amin'ny chat roulette Mampiaraka online Chatroulette avy amin'ny finday maimaim-poana free video olom-pantatra nefa tsy nisoratra anarana miaraka amin'ny ankizivavy ny lahatsary amin'ny chat taona video Mampiaraka maimaim-poana